महिनावारी हुँदा पेट किन दुख्छ, उपचार के गर्ने ? - Tulsipur Online
महिनावारी हुँदा पेट किन दुख्छ, उपचार के गर्ने ?
Posted by News Desk | २९ बैशाख २०७६, आईतवार १३:०५ |
२९ वैशाख/महिनावारी हुने बेलामा धेरै पेट दुख्ने गर्छ। महिनावारीबारे आवश्यक ज्ञान नहुँदा किशोरीले असजिलो महशुस गर्नुका साथै अप्ठ्यारो अवस्थाको समेत सामना गर्नुपरेको हुन्छ।
प्रायःकिशोरीहरूमा १३–१४ वर्षदेखि १७–१८ वर्षसम्मको समयमा महिनावारी नियमित हुने गरेको पाइँदैन।
महिनावारीको समयमा कहिले– कसैलाई धेरै रक्तस्राव भइरहेको हुन्छ भने कसैलाई कम रक्तस्राव हुने गर्छ। तर, यो सामान्य प्रक्रिया हो। झण्डै चालिस प्रतिशत किशोरीमा यस्तो समस्या देखापर्छ।
कतिपय आमाहरूले आफ्ना छोरी लिएर आउनुहुन्छ चार महिना भयो महिनावारी भएको छैन अनि कतिपय आउनुहुन्छ एक महिनादेखि रक्तस्राव भइरहेको छ भनेर।
यदि महिनावारी लामो समयसम्म भएन अथवा लगातार पाँच दिनभन्दा बढी रक्तस्राव भयो भने त्यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न जरूरी हुन्छ।
यस्तो बेलामा थाइराइडको समस्या छ कि छैनरु भनेर आवश्यक परीक्षण गराउनुपर्दछ। कुनै किशोरी धेरै रक्तस्राव भयो भनेर आउँछन् त्यस्तो बेलामा उनीहरूको हेमोग्लोबिन अर्थात् शरीरमा रगतको मात्रा कम भइसकेको हुन्छ। यस्तो हुनुको कारण उनीहरूसँग यसको आवश्यक ज्ञान र बुझाइ कमजोर भएर नै हो।
धेरै मोटोपना र दुव्लोपनाका कारणले पनि महिनावारी नियमित नहुने समस्या हुन्छ। यस्ता समस्या भए तुरुन्तै स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्दछ। हिजो आज यस्तो समस्या सामान्य भइसकेको छ। खासगरी अस्वस्थकर खानपान, नियमित व्यायामको कमी, निष्क्रिय जीवनशैली जस्ता कारणले पनि किशोरीहरूमा मोटोपनाको समस्या बढेको पाइन्छ।
शरीरका लागि धेरै मोटोपना र दुव्लोपना हुँदा महिनावारीका बेलामा समस्या हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा थाइराइड र रगतको जाँचका साथै भिडियो एक्सरे गरी आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिनु आवश्यक हुन्छ।
खासगरी महिनावारीका समयमा किशोरीहरूले आफ्नो सरसफाइमा विशेष ध्यान नदिँदा विभिन्न समस्याहरू निम्तने गर्छ। महिनावारीको समयमा गुणस्तरयुक्त स्यानिटरी प्याड प्रयोग गर्नु अनिवार्य मानिन्छ।
तर हाम्रो आर्थिक अवस्था, सहज पहुँचको अभाव, र चेतनाको कमी, लाज मान्ने प्रवृति जस्ता कारणले कतिपय किशोरीले यस्तो अवस्थामा आफ्नो सरसफाइमा त्यति ध्यान दिएको पाइँदैन।
महिनावारीका समयमा आफ्नो सरसफाइमा विशेष ध्यान नदिएकै कारण धेरै जसोमा संक्रमण भइ पाठेघरसम्म फैलिने र त्यसले बाँझोपनको समेत समस्या ल्याउने खतरा हुन्छ।
गाँउतिर जस्तो पायो त्यस्तै कपडा र पुरानो टालोलाई प्याडको रूपमा प्रयोग गर्ने चलन छ। त्यसैले हाम्रा सम्पर्कमा आउने ग्रामीण भेगका अधिकांश महिलामा परीक्षण गर्दा पाठेघरको संक्रमण भएको हुन्छ।
जसमा तल्लो पेट दुख्ने, ढाड दुख्ने, फोहर पानी बग्ने र योनी चिलाउने समस्या हुन्छ। यस्तो लक्षण देखिने बित्तिकै चिकित्सकसँग परामर्श लिएर आवश्यक चेकजाँच गराउनुपर्दछ।
त्यसैले महिनावारी हुँदा आफ्नो सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। गुप्ताङ्गको सरसफाइ गर्दा सकभर केमीकलयुक्त साबुन, डिटोल लगायतको प्रयोग नगर्नु राम्रो। सफा पानीले मात्र सरसफाइ गर्दा राम्रो हुन्छ। यस्तो बेलामा हरेक चार घण्टामा प्याड परिवर्तन गर्नुपर्छ र सफा राख्नुपर्छ।
महिनावारीको समयमा के गर्ने रु के नगर्ने ?
किशोर अवस्थामा महिनावारी हुँदै पीडा हुन्थेन तर, पौढ अवस्थामा पीडा हुन थाल्यो भने त्यो नराम्रो संकेत हो। यो अवस्थामा पाठेघरमा ट्यूमर भएर पनि महिनावारीका बेला बढी पीडा हुनसक्छ।सेतोपाटी
Previousनेपाल र भियतनामबीच सम्झौता
Nextआईपीएलको फाइनल आज : मुम्बई र चेन्नईबीच प्रतिस्पर्धा, कसले जित्ला उपाधि ?